Daawo Sawirada: Weerarkii maqaaxida Banadir Beach oo la soo gaba gabeeyay.. - iftineducation.com
Daawo Sawirada: Weerarkii maqaaxida Banadir Beach oo la soo gaba gabeeyay..
iftineducation.com – Laamaha ammaanka, ayaa xilli dambe oo xalay ahayd soo gaba gabeeyay weerarkii qorsheynaa, ee fiidnimadii lagu qaaday maqaaxida Banadir Beach, oo ku taala Xeebta Liido Magaalada Muqdisho.
Ciidamada, ayaa waxay toogasho ku dileen laba ka mid ah raggii weerarka soo qaaday, halka ay nolosha ku qabteen mid kale. Ninka la qabtay ayaa ku dhaawacmay qaraxii uu ku bilowday weerarkaasi.
Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, ayaa wuxuu xaqiijiyay in sagaal qof ku dhimatay weerarkaasi. Shan qof oo rayid ah, laba ka tirsan Ciidamada Dowladda iyo labadii nin ee Shabaabka ka tirsanaa ee la dilay.
Korneyl Bishaar Abshir Geedi, ayaa sidoo kale sheegay in laamaha ammaanku ay gacanta ku hayaan mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday, xilli uu ku dhaawacmay qaraxii uu ku bilowday weerarkaasi.
Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), General C/laahi Gaafow Maxamuud iyo Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale (Boorsaani), ayaa weerarka ka dib kormeer ku tagey Xeebta Liido.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo cambaareeyay weerarkaasi, ayaa Al Shabaab ku eedeeyay inay ka biyo diidan tahay xasiloonida ay dadku haystaan.
Wuxuu ku jiiftay dharkii shaqada xaaskiisa ayaa Booliska ku dacaysay